Thwebula Odnoklassniki 16.10.27 isizulu – Vessoft
Odnoklassniki – uhlelo lokusebenza ukuxhumana in izingosi zokuxhumana nabantu ezidumile. Isofthiwe kwenza ukushintshanisa imiyalezo namafayela, wenze amakholi free abangane, ukuxhumana in video chat, ulalele umculo oyintandokazi, njll Odnoklassniki ikuvumela ukuba uvakashele emakhasini amanye abasebenzisi, ukubuka ulwazi ngabo futhi zihlole noma aphawule izithombe. In the software kunamaqembu amaningi ngezihloko ezihlukahlukene, imidlalo izinhlobo ezahlukene kanye impumelelo ukusebenza ohambweni ezithile. Futhi Odnoklassniki azisa mayelana imiyalezo engenayo emisha kanye nezenzakalo ezibalulekile ezihambisana umsebenzisi. Odnoklassniki iqukethe iqoqo amathuluzi ukusetha indlela isaziso kanye nokuphathwa amafayela alalelwayo.
Exchange of imiyalezo kanye namafayela
Ukuxhumana in video ingxoxo
Ukulalela umculo oyintandokazi
Ukulayisha Fast izithombe inkonzo
isaziso esheshayo ngezenzakalo ezibalulekile
Amazwana on Odnoklassniki:
Odnoklassniki Ahlobene software: